LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, HARRY POTTER, HUNGER GAMES, STAR WARS, TWILIGHT – Blaogin'i Voniary
Inona no itovizan’ireo horonan-tsarimihetsika malaza sy voarakitra ho tantara ireo ? Voalohany, samy tantara nofinofy (fiction) ireo, ao anaty tontolo hafa, ahitana zavaboahary sy fiainana hafa. Faharoa manaraka izany, boky avokoa ireo no navadika sarimihetika : nosoratana mpanoratra mahay ary narindran’ny mpanatontosa manan-talenta. Ary fahatelo farany, tsara dia tsara avokoa na ny boky na ny sarimihetsika : ny fizotry ny tantara, ny fahaizany mamorona zavatra amin’ny antsipirihany, ny mozika ao anatin’ny horonantsary, ny mpilalao sy ny sisa. Antenaiko fa tsy anaiky ho ambakan’ireo isika Malagasy e !
Ny anganon’ny Ntaolo Malagasy dia maro tsy tambo isaina ary ahitana sokajy isan-karazany : fitiavana, mampihoron-koditra, traikefa mahafinaritra, ady, tontolo hafa sy ny sisa. Inona marina moa no atao hoe angano ? « Ny angano dia tantara ifandovana an-dovantsofina mampiseho zavatra toa tsy azo inoana, izay angamba marina ihany tany an-tendrony, saingy novaovan’ny taranaka nifandimby taty aoriana » (in Rakibolana malagasy, p.81). Ireny angano sy arira ireny dia natao ampitana lesona sy itantarana fiandohan-javatra matetika. Tsy vitsy koa ireo mpanoratra malagasy amin’izao fotoana izao no miangaly angano ary misy mifandraika amin’ny vanim-potoana iainantsika. Raha ireny no avadika horonan-tsary dia azo antoka fa ahaliana. Ny tantara nofinofy indray tsy dia mahafantatra asa soratra malagasy ao anatin’io sokajy io aho. Ireny anefa dia anisany manabe sy mampiita-tsaina ary tsy ilaozan’ny toetra andro mihitsy. Vokany : raha te hanonofy ny tanora sy ny ankizy malagasy dia boky sy horonan-tsary avy any ivelany no ahitany izany.
Betsaka ny horonan-tsarimihetsika Malagasy. Mitobaka mihitsy aza ny famokarana tao anatin’izay folo taona farany izay. Miparitaka etsy sy eroa ny kapila mangirana ary varotan’ny mpanao hosoka amin’ny vidiny mirary. Iny moa resaka hafa indray, izay mbola iadian’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Fa misy olona tsy mba voasarikin’ny « Film » gasy mihitsy, izaho ao anatiny. Ny antony dia efa zatra mijery ny vitan’ny vazaha izahay ka toa peta-toko ny vokatra Malagasy sasany eo anoloan’izany. Sasany hoy aho satria misy kosa hita fa miezaka sy mamoaka horonan-tsary manara-penitra sy manintona. Amiko, ny sarimihetsika tsara dia mahafeno fepetra telo : mampiala voly, manita-tsaina ary tsy lany hamamiana. Ny laro ahazahoana ireo dia ny fizotry ny tantara, ny toetoetran’ireo mpandray anjara, ny resaka, ny pitsopisony, ny fahaizan’ny mpilalao, ny fampisehoana mahafinaritra, ny hira sy ny feon-kira. Ireo no anisan’ny mampiavaka ny le seigneur des anneaux, Harry Potter, Hunger games, star wars ary Twilight.
Ny tantara Malagasy fihaino amin’ny onjam-peo indray dia deraiko manokana satria na ny indray miseho na ny mitohy dia betsaka no mahaliana. Maro dia maro tokoa ny mpanoratra sy ny mpanatontosa no mahay mampitaintaina sy mampihetsi-po. Etsy andaniny koa ny mpilalao mahay mamoaka tsara ny fihetseham-po ao anatin’ny tantara. Misy aza moa ireo feo mahazatra antsika toa ny an’i Urlich Andriamanantena, Solofo José, Christophe Rabearimanana sy ny maro hafa. Rehefa sendra ireny tantara mampihoron-koditra ireny: ny matotoa, ny avelo sy ny forongony, dia tsy mahatombon-tsiraka mihitsy ny tena satria na ny feon-kira aza dia efa mampatahotra. Hatrany ambanivohitra hatraty an-tanan-dehibe, misomebiseby maka toerana ny mpianakavy rehefa mipaika ny ora’ny tantara. Soa fa nisy ny tantara mbola ahitana fa mahavita mamorona ary mahay mampanonofy isika Malagasy.
Ny angano no anisan’ny nentin’ny Malagasy itaizana ny ankizy sy ny tanora. Ankehitriny moa efa vitsy ny mpianakavy no mifampitantara angano eo amorom-patana isan-kariva. Ny boky misy angano koa tsy dia manavanana ny sarambabem-bahoaka. Ny tantara sy ny sarimihetsika no tena anisan’ny fitaovana natolotry ny teknolojia ho ampiasantsika amin’izao fotoana izao. Mino aho fa tsy ho ela ny mpamokatra malagasy dia hamoaka horonantsary goavana sy tsy mena-mitaha amin’ny hafa ka hanintona ny isan-tsokajiny.
angano malagasy, fiction gasy, film gasy, maha-malagasy, malagasy, sarimihetsika malagasy, tantara malagasy
GASY AHO… TSY AN-TENDROMOLOTRA FOTSINY FA…
2 commentaires sur “LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, HARRY POTTER, HUNGER GAMES, STAR WARS, TWILIGHT”
Ra Piera dit :
Mahafinaritra ery izany mamaky teny malagasy tsy misy larony izany…
Mankasitraka, ary tohizo fa izahay mamaky foana :p
5 août 2016 à 14 h 19 min
Ianao no ankasitrahana indrindra ô!